M/weyne Faroole iyo wafti oo hoggaaminayo oo maanta u safray dalka dibaddiisa. – Radio Daljir
Garowe, Nov 08 – M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxman Sheekh Maxamed ?Faroole? iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa maanta ka anbabaxay garoonka diyaaraha ee magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland.
Waftiga m/weynaha oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda dawladda Puntland ayaa u kicitimay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaama garoonka ku sii sagootiyey qaar ka mid ah madaxda dawladda Puntland oo uu ka mid yahay M/weyne ku xigeen Gen. Cabdisamd Cali Shire.
Socdaalka waftigaan Puntland ee uu hoggaaminayo m/weyne Faroole, ayaa lagu sheegay in uu salka ku hayso ka qayb galka shir hay?adaha deeqaha bixiya uga furmi doona magaalada Nairobi, kaasi oo sida la qorsheeyey socon doona muddo labo maalmood ah.
Safarka m/weynaha waxaa ku waheliya wasiirka arrimaha gudaha Gen. C/laahi Jaamac Ilkajiir, agaasimaha guud ee madaxtooyada Cali Barre Jaamac, agaasimaha macdanta Ciise Cumar Dhoowe, waxaana lagu wadaa shirkaasi in ay ka jeediyaan khudbado ku aaddan baahiyaha dhaqaale ee Puntland iyo gaabiska hay?adaha deeqaha bixiya marka lla eeggo waxqabadkooda deegaannada Puntland sidaana waxaa idaacadda Daljir u sheegay agaasimaha baratakoolka madaxtooyada C/salaan Xasan Ducaale.
Muddada waftigaan ay booqashada ku joogaan dalka Kenya ayaa lagu wadaa in ay kulamo la yeeshaan madaxda dawladda Soomaalida ee ku sugan Kenya iyo sidoo kale wada hadallo ay iyana la gali doonaan mas?uuliyiinta beesha caalamka, hay?adaha QM ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi.
Safarka m/weynaha dawladda Puntland iyo waftigiisu ay ugu anbabaxeen dalka Kenya oo uu ka furmi doono shirka deeq bixiyayaashu, waxaa uu ku soo beegmayaa iyadoo muddooyinkii ugu danbeeyey dawladda Puntland ay ka cabanaysay culayska dadka barakacayaasha ah oo si xooggan u buux dhaafshay Kaamamka dadka tabaalaysan loo qoondeeyey.